ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်ဆုံးငါးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 22 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကိုယ့်ရိုးရာချိန်းတွေ့၌ရှိသကဲ့သို့, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အတူအနည်းငယ်အန္တရာယ်များကိုဆောင်ကြဉ်းဘူး. အမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ထွက်ရှိလူဖြစ်ရမှသွားကြသည်. တော်တော်များများအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအချို့ရာဇဝတ်ကောင်များသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်သက်လူထွက်ပေါင်းပင်မှစိစစ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုအတိုင်းအတာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြချိန်တွင်, ဒီ foolproof ဘယ်တော့မှမဖြစ်, ဒါကြောင့်မိမိတို့လက်သို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတိုင်းအတာကိုယူတစ်ဦးချင်းစီအထိလုံးဝဖြစ်ပါသည်.
1. သင့်ရဲ့အီးမေးလ်အကောင့်အမည်မသိ Make. , Hotmail သို့မဟုတ် Yahoo ကဲ့သို့အခမဲ့အီးမေးလ်အကောင့်န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ! မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်မပေးပါဘူးတဲ့အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဖွင့်ထားရန်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပွဲများနှင့်ဆက်သွယ်သောအခါသင်၏အလုပ်ကအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်သင့်နာမည်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြသောလိပ်စာမသုံးပါနဲ့. လည်း, လွန်းမကြာမီကသင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာထုတ်မပေးပါဘူး. သူတို့ SPAM မက်ဆေ့ခ်ျများထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်မဲ့ဆိုရင် single ထဲကအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစုဆောင်းရန်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့အထဲကအချို့ရှိလူရှိပါတယ်.
2. လာသောအခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုအဆင့်တွင်သင့် cell phone နံပါတ်မယ့်အစားသင့်ရဲ့အိမ်အရေအတွက်ပေးပါ. သင်ဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဆိုရင်, သင့်အိမ်ဖုန်းနံပါတ်ထုတ်ပေးခြင်းသင့်ရဲ့အပြည့်အဝအမည်နှင့်အိမ်လိပ်စာကိုထုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်လက်တွေ့ကျကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. အွန်လိုင်းနည်းပညာဖြင့်, Google ကသို့အိမ်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ရန်လွယ်ကူသည်, နှင့်, အရေအတွက်စာရင်းသွင်းလျှင်, သင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူတက်ပြပါလိမ့်မယ်. သင်ဟာသင့်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ထက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များထုတ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မည်.
3. သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်ရက်စွဲများအပေါ်အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌တွေ့ဆုံ. အဲဒီမှာတဝှန်းသက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုနှင့်သင့်ရက်စွဲသင့်အိမ်လိပ်စာသိမည်မဟုတ်သကဲ့သို့အများပြည်သူနေရာအရပ်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံတဲ့အဆင့်မြင့်မားကိုအာမခံ. ၎င်းသည်သင့်အားသင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောပြရန်လည်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်နှင့်သင်ပြန်လာသောလိမ့်မည်သည့်အခါ, အရေးပေါ်အတွက်.
4. ပိုက်ဆံအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေတာမည်သူမဆိုငြီးငွေ့ဖြစ်. သင်တွေ့ဆုံမီသင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုမှတဆင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသူတစ်ဦးဦးကိုငွေဘို့သင့်ကိုတောင်းဆိုနေတာစတင်လျှင်, သင်နီးပါးသူတို့ကိုလိမ်လည်မှုကိုအနုပညာရှင်တွေပါအာမခံနိုင်. ìRussianBrideîအေဂျင်စီများထွက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရှိခြင်းဖြင့်ပိုက်ဆံထုတ်ကိုလိမ်လည်မှုသတိမရှိသောလူတို့အားကြိုးစားနေ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသမီးများပင်တကယ်မတည်ရှိပါဘူး) သူတို့ကိုကြည့်ဖို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တို့အဘို့ထဲကနေငွေထွက်သည်ကိုမေး, သူတို့ကပိုက်ဆံလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့သာ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အခြားသူတစ်ဦးရန်ငွေပေးကမ်းပါဝင်ပတ်သက်နေသင့်ကြောင်းနေဖို့ရာအကြောင်းမရှိတော့ပါ. သင်လိုဗေးနီးယားတွင် Iveta သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုလျှင်, သူမ၏ကြည့်ရှုခြင်းငှါပျံလာ, ဆင်ကန်းတောတိုးသူမ၏ပိုက်ဆံမပေးပါဘူး.
5. သင့်ရဲ့အူကိုယုံကြည်စိတ်ချ. သင့်ရဲ့အူဗီဇယောက်ျားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောမဟုတ်ကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်, မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်နာကျင်တက်အဆုံးသတ်မည်, ကဗီဇကိုနားထောင်. သင်သည်မည်သည့်အနီရောင်အလံများသတိထားမိမယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောလွန်းမကြာမီကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအဘို့အနှိပ်အဖြစ်, ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်သင့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ်တက်ကောက်ဖို့ဇွတ်အတင်း, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုသဘောထားတွေကိုသင်တွေ့ဆုံမီကပင်, သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ကြိမ်စဉ်းစား, အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အိမ်လိပ်စာ. စနေပြီလက်ထပ်ရစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးသည်မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်. သူတို့သည်သင့်ကိုပဌနာချင်တယ်ဘယ်တော့မှဆိုရင်, သူတို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, မထင်ရှားသောအရာခပ်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစား, သင်ကအိမ်ထောင်ပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်.
အချို့သောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနောက်ခံအရောင်စစ်ဆေးမှုများ tout သော်လည်းကြောင်းသတိရပါ, သင်သည်သင်၏အစောင့်အပေါ်ဆက်နေရန်ရှိသည်. လူတွေကဒါရာဇဝတ်မှုနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစစ်ဆေးမှုများကိုသင်မှားသောလုံခြုံရေးသဘောမျိုးကိုအပ်ပေးစေပါဘူး background ကိုစစ်ဆေးမှုများအက်ကြောင်းမှတဆင့်ချော်နိုင်တယ်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အရည်အသွေးကဆိုရင် single တွေ့ဆုံရန်လုံခြုံပြီးပျော်ရွှင်စရာလမ်းရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ခွင့်ပြုဘို့အဘယ်အရာကိုမျှ ယူ. အမြဲအစအဦး၌သင်တို့၏အစောင့်ကိုစောင့်မျှော်နေဘယ်တော့မှမ.